I-High Current Vacuum I-Ceramic Component China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Metallized Ceramic Insulator > I-High Current Vacuum I-Ceramic Component
Ukuze ufinyelele i-ceramic kwensimbi ejoyina isicelo, ukumbozwa kwensimbi kuzosetshenziswa endaweni ecacile ye-ceramic, bese kuthi i-ceramic yensimbi, i-ceramic ku-ceramic ingabhaniswa ndawonye. Sinikeza uhlobo oluthile lwe-metallization nge-metal ensimbi nge-banding, ukushicilela kwesikrini, ukuxubha, ukupomfa, njenge-Mo / Mn nge-plane ya-nickel, i-Tungsten (W) ene-golden plating, i-silver plating.
Ngokuvamile kwenziwa ngama-alumina oxides ne-min. 95% ukuhlanzeka. Le insulator ensimbi eyakhiwe yinkimbinkimbi ingakhiwa ngokumiswa okomile, ekwakheni umjovo we-ceramic nokucindezela okushisayo. Ngenxa yokugxila okuphezulu okuphezulu, amandla aphikisayo aphakeme kanye nezakhiwo eziphezulu zamanje, zonke zidlala indima ebaluleke kakhulu kumadivaysi asekelwe ngaphandle.
Ngaphandle kwekheramikhi ensimbi, sinikeza ezinye izingxenye ze-ceramic, njengezici ze-zirconia ze-ceramic, izimbozo ze-ceramic, i-thermostat ceramics, i-textile ceramics, i-platinum ye-ceramic ehlukahlukene ne-tubes ceramic njalonjalo.
Isetshenziswa kabanzi kumadivayisi e-elekthronikhi, amadivaysi aphezulu avulekile, ubuchwepheshe bezokwelapha nobuchwepheshe bezinzwa, ezempi, i-aerospace njalonjalo.
Ukuphawula: Ngaphandle kwegumbi le-ceramic elingenhla, siphinde sinikeze izinsimbi ezihlukahlukene zensimbi ye-ceramic, i-disc ceramic disc, i-substrate ensimbi ensimbi, izindandatho ze-ceramic zensimbi njalonjalo.
A: Ukuphakama kunoma iyiphi i-batch kuzokwenziwa ukuhlolwa kwe-International AQL standard. Ukuhlolwa kwezimonyo ezingu-100% kuzokwenziwa.